လက္ခဏာများ | အောက်တိုဘာလ 2021
ကျွန်ုပ်၏ Juno သင်္ကေတကိုဘယ်လိုရှာရမလဲ။
ကျွန်ုပ်၏ Juno သင်္ကေတကိုဘယ်လိုရှာရမလဲ။ သင်၏ Juno sign.Go ကိုမည်သို့ astro.com သို့ရှာရမည်နည်းဤတွင်ဤနေရာတွင် 'Free Horoscopes' ကိုနှိပ်ပါ။ ထို့နောက် 'Extended Chart Selection' ကိုရွေးချယ်ပါ။ သင်၏မွေးစာရင်းအချက်အလက်ကိုထည့်ပါ။ (မွေးသက္ကရာဇ်၊ တည်နေရာ, စသဖြင့်။ ) 'Chart Drawing Style' သို့သွားပါ။ ထို့နောက် 'Astrodientst w ကိုရွေးချယ်ပါ။ asteroids.7 ။ 2021 ။
သင်၏နိမိတ်လက္ခဏာတွင်ဂျူပီတာဘာကိုဆိုလိုသနည်း။ သင်၏ဂျူပီတာသင်္ကေတသည်သင်၏နက္ခတ်ဗေဒင်အလုပ်အကိုင်နည်းပြဖြစ်သည်။ ဂရိဒဏ္myာရီတွင်ဂျူပီတာသည်နတ်ဘုရားဘုရင်ဇုသနှင့်ပေါင်းစပ်ခဲ့သည်။ အခြေခံအားဖြင့်ဂျူပီတာဟာသူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးစွမ်းအားဖြစ်တယ်။ သင်၏ဂျူပီတာ၏နိမိတ်လက္ခဏာကသင့်ဘဝရည်မှန်းချက်များသည်သဘာဝအရမည်သည့်နေရာတွင်ရောက်ရှိနေကြောင်းနှင့်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်သို့ရောက်ရှိရန်အလွယ်တကူအချိန်ရမည့်နေရာကိုဖော်ပြသည်။ ၁၉၂၀ ။
ဘယ်ဂြိုလ်ကံကောင်းခြင်းအတွက်တာ ၀ န်ရှိသလဲ။
ဘယ်ဂြိုလ်ကံကောင်းခြင်းအတွက်တာ ၀ န်ရှိသလဲ။ ဂျူပီတာ
မာကျူရီသည်နိမိတ်လက္ခဏာကိုဘယ်လောက်ကြာကြာဖြတ်သန်းမှာလဲ ဆိုင်းဘုတ်တစ်ခုစီ၌မာကျူရီအရှည်သည် retrogrades ကြောင့်ပြောင်းလဲမှုရှိသည်။ မာကျူရီသည်ရက်ပေါင်း ၁၅ မှ ၆၀ အတွင်းနိမိတ်လက္ခဏာတွင်ရှိနိုင်သည်။ retrograde သံသရာများကြောင့်မာကျူရီသည်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုနေမှ ၂ ခုထက်ပိုသောဆိုင်းဘုတ်များမဟုတ်ပါ။ 2020 ။
နက္ခတ်ဗေဒင်၏ကံကြမ္မာ၏အစိတ်အပိုင်းကဘာလဲ။ Fortune Fortune ၏နေရာသည်လူတစ် ဦး ၏ဘ ၀ တွင်သာယာဝပြောမှု၏လက္ခဏာဖြစ်သည်။ အစဉ်အလာအရနက္ခတ်ဗေဒင်တွင်ကံကြမ္မာ၏အစိတ်အပိုင်းကိုမွေးဖွားခြင်းဇယားတွင်နေ၊ လနှင့်နိူင်ငံရေးနိမိတ်လက္ခဏာတို့၏ထိပ်ဆုံးနေရာသုံးခု၏လမ်းကြောင်းများဖြင့်တွက်ချက်သည်။ 2021 ။
ကျွန်ုပ်၏တိုးတက်လာသော Sun ကဘာလဲ။
ကျွန်ုပ်၏တိုးတက်လာသော Sun ကဘာလဲ။ တိုးတက်လာသောနေသည်တစ်နှစ်လျှင်တစ်ဒီဂရီလှည့်ပတ်သွားပြီးလူတစ် ဦး အနေဖြင့်သင်၏ရင့်ကျက်မှုနှင့်ကြီးထွားမှု၊ တိုးတက်သော Sun ရှုထောင့်၏သက်ရောက်မှုသည်ရှုထောင့်အတိအကျမတိုင်မီနှင့်ပြီးနောက်တစ်နှစ်ခန့်ကြာရှည်နိုင်သည်။
မင်းရဲ့နိမိတ်မှာ Saturn ကဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။
မင်းရဲ့နိမိတ်မှာ Saturn ကဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ Saturn ကိုဒီနိမိတ်ထဲမှာထည့်လိုက်တဲ့အခါသင်ခန်းစာကတခြားသူတွေရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုကြောက်ပြီးသင်အမှန်တကယ်မည်သူဖြစ်သည်ကိုသင်ကန့်သတ်သည်ကိုညွှန်ပြသည်။ မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်း၊ အခြားသူများအားသင်၏ခွန်အားပေးခြင်းနှင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်နယ်နိမိတ်များကိုမလေးစားခြင်းစသည့်မေးခွန်းများသည်သင့်အတွက်ပေါ်လာနိုင်သည်။ 2020 ။
os ရော့စ်သည်အဘယ်နိမိတ်လက္ခဏာကိုအုပ်ချုပ်သနည်း။ Eries သည် Aries တွင်နေရာယူထားသည်။ မီးတောက်လောင်သောနိမိတ်လက္ခဏာသည်လှုပ်ရှားမှု၊ ပြိုင်ဆိုင်မှု၊ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ခြင်းနှင့်ဘဝတွင်အောင်မြင်ခြင်းတို့ကိုလိုလားသည်။ Aries မှ Eros သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာအားအပြည့်အဝဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဆက်နွယ်မှုကပိုမဖြစ်နိုင်ဘူး၊ ၂၀၁၃ ။
လိင်ဆိုင်ရာဆွဲဆောင်သောအဘယ်သင်္ကေတလက္ခဏာများကိုတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ချစ်ကြသနည်း။
လိင်ဆိုင်ရာဆွဲဆောင်သောအဘယ်သင်္ကေတလက္ခဏာများကိုတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ချစ်ကြသနည်း။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အပြန်အလှန်ဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသည့်ဇီနိယစုံတွဲများ Taurus နှင့် Scorpio ။ ဤနိမိတ်လက္ခဏာနှစ်ရပ်သည်အလိုဆန္ဒမှသက်သက်သာသာဆက်သွယ်နိုင်သည်။ Gemini နှင့် Libra ။ ဒီလေကြောင်းသင်္ကေတနှစ်ခုဟာအစပိုင်းမှာအရာအားလုံးကိုမီးပွားပေါ်စေလိမ့်မယ်။ ကင်ဆာနှင့် Aries ။ Libra နှင့် Pisces.4 2020 ။
နိုင်ရန်အတွက်ရာသီဥတု၏ 12 ဆိုင်းဘုတ်များဘာတွေလဲ?
နိုင်ရန်အတွက်ရာသီဥတု၏ 12 ဆိုင်းဘုတ်များဘာတွေလဲ? Zodiac ဆိုင်းဘုတ် ၁၂ ခုကဘာတွေလဲ။ တိရိစ္ဆာန်ဆိုင်းဘုတ် ၁၂ ခုမှာ Aries၊ Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius and Pisces.2 ဖြစ်သည်။ 2020 ။
ကျွန်ုပ်၏အိမ်အကျယ်အ ၀ န်းကိုကျွန်ုပ်မည်သို့သိနိုင်သနည်း။
ကျွန်ုပ်၏အိမ်အကျယ်အ ၀ န်းကိုကျွန်ုပ်မည်သို့သိနိုင်သနည်း။ The cusp house သည်အိမ်တစ်လုံး၏အဆုံးနှင့်နောက်တစ်ခု၏အစကိုသတ်မှတ်သောမျဉ်းဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် Ascendant သည်ပထမ၏အစပိုင်းတွင်ဖြစ်ပြီးသတ္တမမြောက်၏အစွန်အဖျား၊ Medium Coeli သည်ဒသမအိမ်၏နယ်မြေနှင့်စတုတ္ထမြောက်၏ Imus Coeli ဖြစ်သည်။
Sun နိမိတ်လက္ခဏာများနှင့်သဟဇာတဖြစ်ပါသလား သငျသညျကောငျးကငျဘုံ၌ပွဲစဉ်ကဲ့သို့ခံစားရနိုင်ပါတယ်ကဲ့သို့တူညီသောရာသီခွင်နိမိတ်လက္ခဏာနှင့်အတူမိတ်ဖက်ရှာဖွေခြင်း။ မင်းမှာတူညီတဲ့တန်ဖိုးတွေ၊ အလားတူ quirks တွေ၊ ဘဝကိုအတူတူပဲလိုချင်တယ်၊ ပြီးတော့သင်ဟာဘယ်သူ့ကိုမှမတူတဲ့နည်းနဲ့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ရနေပုံရတယ်။ ကောင်းကျိုးများနှင့်ပတ်သက်လာလျှင် Monahan ကသင်၏နိမိတ်လက္ခဏာကိုချိန်းတွေ့ခြင်းသည်အလွန်လွယ်ကူသည်ဟုခံစားရသည် ။13 2020 ။
လသည်ရာသီခွင်ကိုမည်သို့ဖြတ်သန်းသနည်း။ ၂၈ ရက်အတွင်းကမ္ဘာသည်တစ်ပတ်လည်လည်ပတ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည် Zodiac ဆိုင်းဘုတ်တစ်ခုစီကို ၂ ရက်မှ ၂ ၁ ရက်အထိဖြတ်သန်းသွားသည်။ မည်သည့်နိမိတ်လက္ခဏာမှမဆိုမင်းသည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်လ၏နိမိတ်နှင့်မွေးဖွားသောဇယားရှိအခြားဂြိုလ်များပေါ်တွင် အခြေခံ၍ သင့်ကိုအကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မည်။ သင်၏မွေးဖွားမှုဇယားကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်သင့်မွေးကင်းစမွန်းနိမိတ်ကိုတွေ့နိုင်သည်။ 2017 ။
တိုးတက်လာသောလဆိုင်းဘုတ်ကဘာလဲ။ သင်၏တိုးတက်လာသောမွန်းသည်ဖြစ်ပျက်မည့်ဖြစ်ရပ်များအတွက်ကြီးမားသောအစပျိုးခြင်းဖြစ်သည်။ မည်သည့်နေရာတွင်လည်ပတ်ပါစေသင်၏ဘဝ၏မည်သည့်နေရာကိုအများဆုံးအကျိုးသက်ရောက်နိုင်ကြောင်းသဲလွန်စတစ်ခုဖြစ်သည်။ ခန့်မှန်းရမည့်အနေအထားမှကြည့်လျှင်အဓိကဖြစ်ရပ်တစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့၏တိုးတက်သောမွန်းသည်အဆင့် (သို့) နိမိတ်၏အဆုံးမှာဖြစ်သည်။
နေကိုရာသီဥတုအခြေအနေနိဂုံးချုပ်သောအခါဘာကိုဆိုလိုသနည်း။ နက္ခတ်ဗေဒင်ဘာသာတွင်သင်၏ Sun နိမိတ်လက္ခဏာသည်သင်၏ Zodiac ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုပြသသည်။ သင်၏လသည်နိူင်ငံရေး - နေ၏နောက်မှသင်၏ horoscope ဇယားတွင်ဒုတိယအရေးအပါဆုံးသြဇာလွှမ်းမိုးမှုဖြစ်ပြီးသင်၏စိတ်ခံစားမှု၊ သင်၏ Sun နိမိတ်လက္ခဏာကိုသင်၏မွေးသက္ကရာဇ်နှင့်မွေးဖွားလမှတစ်ဆင့်ဆုံးဖြတ်ရန်လွယ်ကူသည်။ ၂၀၁၅
နေကိုဘယ်လိုဖြတ်သန်းသလဲ နက္ခတ္တဗေဒတွင်နေနှင့်နေသည်ကမ္ဘာနှင့်အကြားရှိမည်သည့်အရာဝတ္ထုကိုမဆိုရွေ့လျားစေသည်။ ဤသည်အဓိကအားဖြင့်ဂြိုလ်များနှင့်မာကျူရီများပါဝင်သည်။
အင်္ဂါဂြိုဟ်သည်နိမိတ်လက္ခဏာများအားမည်မျှလျင်မြန်စွာရွေ့လျားသွားသနည်း။ အင်္ဂါဂြိုဟ်သည်ပိုမိုလျင်မြန်စွာရွေ့လျားနေသောဂြိုလ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဘယ်အချိန်နှင့်ဘယ်လောက်မကြာခဏ retrogrades ပေါ်မူတည်ပြီး ၂ လမှ ၇ လအထိဆိုင်းဘုတ်တစ်ခုတွင်သုံးနိုင်သည်။ အင်္ဂါဂြိုဟ်သည်ရာသီဥတုတစ်ခုလုံးကိုဖြတ်သန်းရန်နှစ်နှစ်ခန့်ကြာသည်။ 2021 ။
ယူရန်းနပ်စ်ကိုမင်းရဲ့နိမိတ်မှာထည့်ထားတာကဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ သင့်လျော်စွာ, Uranus နည်းပညာ, ပုန်ကန်ခြင်းနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုသင်္ကေတ။ ဒီတော်လှန်ရေးကမ္ဘာဂြိုဟ်ဟာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုမုန်းတယ်။ ယူရေးနပ်စ်သည်နိမိတ်လက္ခဏာတစ်ခုစီကိုဖြတ်သန်းရန်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၇ နှစ်ခန့်ကြာပြီးတစ်နှစ်လျှင်ရက်ပေါင်း ၁၅၀ ခန့်ပြန်လည်ထူထောင်ခဲ့သည်။ 2021 ။
ကျွန်ုပ်၏ Vertex သင်္ကေတကဘာကိုဆိုလိုသနည်း။
ကျွန်ုပ်၏ Vertex သင်္ကေတကဘာကိုဆိုလိုသနည်း။ Vertex / Anti-Vertex အမှတ်အသားအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤဝင်ရိုးသို့တက်ကြွမှုကိုတွေ့ကြုံနိုင်သည်ကိုပြနိုင်သည်။ Vertex သည်ကျွန်ုပ်တို့ထိန်းချုပ်မှုမရှိသောအတွေ့အကြုံများကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ထို့ကြောင့် vertex ကိုကံကြမ္မာနှင့် karmic ပုံစံများနှင့်ပိုမိုဆက်စပ်ထားသည်။ ဒါဟာအစ used.8 ခံရကြသည်မဟုတ်ကြောင်းပင်အရည်အသွေးတွေကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ 2020 ။
ဘယ်အင်္ဂါဂြိုဟ်သည်ဘယ်သောအခါမှ retrograda သွားပါသလဲ?
ဘယ်အင်္ဂါဂြိုဟ်သည်ဘယ်သောအခါမှ retrograda သွားပါသလဲ? မာကျူရီ retrograde သည်မေလ ၃၀ မှဇွန် ၂၃ အထိဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ Venus, Mars နှင့် Mercury retrogrades ကဲ့သို့သောကမ္ဘာဂြိုဟ် retrogrades သည်ရွေ့လျားမှုနှေးကွေးခြင်းနှင့်နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ခြင်းအတွက်အရေးကြီးသောအချိန်များဖြစ်သည်။ 2021 ။